Umhla My Pet » 10 Izizathu Kutheni Cats njengabongamileyo kwisithandwa
ngokuthi Tegan Jones
ukubuyekezwa: Sep. 25 2020 | 2 min ukufunda
Ngaba uqhelene kwelo nqanaba ebomini xa ucinga indlela inoboya, purring neqabane ukunilondoloza inkampani? Musa ukuba neentloni; babamkelayo. Neekati ezicingelwayo, ndize ndiye kude kuthi ukuba kwiimeko ezininzi, bacinge kungcono ku nokuba namaqabane. qiniseka, ukuba akuqinisekanga akwazi ukuzalisekisa izinto ezibonakalayo (leyo ngokuqinisekileyo into swi Umhla My Pet), kodwa loo nto i-intanethi, ubugcisa kunye credit cards namhlanje ngenxa. Yintoni ke onokuyenza kukunika uyandithanda, inkampani kwaye kakhulu lonke ehleka. Abantu kuphosa 'crazy cat lady' nebala elijikeleze bonke bafuna, kodwa kukho ezininzi izizathu hilariously jikelele ukuba ukhethe ikati phezu ndiyathanda-.
1. Manqaphanqapha Ungaphoswa Mark
Ifoto ngu inkedama cc
Uyazi ukuba ndithetha ngantoni zangasese apha, manenekazi. Neekati ngokubanzi kakhulu ngqo xa kuziwa ejolise.
2. Ibe kukuzigcina Well abanembeko
Ifoto ngu Luke Jones cc
Iikati okunene abakhathalele imbonakalo yabo kukuzigcina mhle. qiniseka, ezinye breeds ezinde iinwele kufuneka behlaziya eyongezelelweyo, kodwa ubuncinane bayayonwabela.
3. Bona Maintenance Obuphantsi
Ifoto ngu oskay cc
Zonke iikati bafuna ukulala, ukutya, PAT kunye lokudlala. Uya kuba ukujongana wawungasekho olubi, ukungahoywa ngokweemvakalelo okanye kugxilwa kuyo TurtleMan, Dynasty Duck okanye nantoni na enye guys ikaka babonakala bephila ukubukela.
4. Baya Unokukuthuthuzela xa uyagula
Ifoto ngu contraption cc
Yeekati ngengqiqo wesithandathu xa kuziwa yokugula, kwaye zidla kuthuthuzela nonothando xa umnini lwabo luyagula. Juxtapose oku indoda ekuqhubeni ngokucacileyo kuni ukuze bona benze umsebenzi Man Umkhuhlane ne uyakwazi ukubona isizathu sokuba neekati ukhetho awongamileyo.
5. Baya kugcina ushushu
Ifoto ngu Alisha Vargas cc
ikati yakho ayiyi kugweba okanye uphambuke kuwe ngenxa icicles manyumnyezi kukuba ubize iinzwane. Bacinge kukuvuyela snuggle kwaye sigcine wena iinyawo zakho induli efudumeleyo.
6. Akukho In-Laws
Ifoto ngu admiller cc
Akukho unina-in-mthetho phithi plus enkulu encwadini yam.
7. NeePAT neePAT kuphela
Ifoto ngu Emilian Robert Vicol cc
Ke asilindelanga nto ngakumbi umyalezo. Uyazi ukuba ndithetha ukuthini na ngaloo, namanenekazi.
8. Bona Musani ukugweba otya
Ifoto ngu alex Goodey cc
Ukwenza yesnekhi 1am ngaphandle yebhotolo yamantongomane, chips itshokolethi kunye necephe? Wekati uya kuba phantsi loo. Hayi Amehlo ngokuzenza bhetele okanye ngothsuphe unsubtle malunga Ubulungu gym apha.
9. Akukho Ekati kwi Sink
Ifoto ngu ken Bosma cc
yeah, ukuba pun ayizange yenzeke. Wamkelekile.
10. Wena kufumana ingxelo yabo Medical
Ifoto ngu anja_johnson cc
Ukuba izandi ezothusayo, kwaye mna bekhululekile ngokupheleleyo ukuba. Kodwa kufuneka ukuvuma ukuba Kuyathuthuzela ukwazi akukho miba akumangalisi vd nomhlobo wakho inoboya Lwekati.